Kyoto University - Kudzidza muJapan. Higher Education Kunze Kwenyika.
guta : Sakyo-ku
Musakanganwa kuti discuss Kyoto University
Kubvira panheyo dzaro 1897, Kyoto University unomushandira kukudziridza zvedzidzo rusununguko pasi mweya dzekuzviriritira uye tizviremekedze, uye kuvhura horizons itsva rokusika nenyanzvi kutozoedza. Yunivhesiti rave aida kupa murunyararo coexistence mhiri yose vomunharaunda.
nyika yedu iri parizvino dzichisangana zvinoverengeka nokukurumidza kuchinja kunge sanzwisisika muzana remakore rechi20. The yose kunetsana mamiriro, izvo aitarisirwa kugadziriswa pamwe pakupera kweHondo Yemashoko, chaizvoizvo kukura mune zvose kunzwisisa uye kuchinyanya somugumisiro kwemarudzi uye zvitendero kusawirirana. Panguva imwe, kumhanya pose kukanganisika kwezvakapoteredza Inowedzera, zvisati huru dzoga uye zvinouraya zvinotapukira kunoparadza mhiri nyika, uye zvinetso zvemari kuzunungusa zvose National upfumi uye munhu upenyu zviku- ru. Africa vanofanira afungisise zvavanenge kumira nokuti inonetsa izvi. Zvichakadaro, hurumende yeJapan iri kushanda pamwe mumayunivhesiti uye maindasitiri kusimudzira kurima guru munyika yose kwevanhu, uye anodana mumayunivhesiti kushandisa kuchinja zvakagadzirirwa kumutsa makwikwi yavo pose. Kyoto University zvino anofanira kuziva sei zvakanakisisa sei zvinodiwa nehurumende uye vakwanise vanhu vachiramba wechokwadi ayo mweya kuvambwa.
The vatatu Musimboti mishoni ane yunivhesiti vari dzidzo, tsvakurudzo, nemagariro nomupiro. Vaviri ava, tsvakurudza uye nomupiro evanhu, vakakodzera kuchinja pakupindura pose nezvemaitiro. dzidzo, zvisinei, ine zvinokosha hunhu kuti ndinotenda kuti isingachinjiki. Maererano kuzvipira wayo dzakazvimirira kudzidza, Kyoto University anofanira kuramba chinzvimbo chacho sezvo nhare Yedzidzo rusununguko, vakanyarara zvishoma vakawanda munzanga uye unconstrained negungano. Kuti tidaro, yunivhesiti inofanira kuva nzvimbo zvedzidzo kutozoedza kunogona mberi wakanyarara, ukuwo kupa mahwindo munyika uye vanhu. mahwindo izvi zvinogona rakazaruka fakaroti nenhengo akashongedzerwa cheka-kumucheto ruzivo kwenyika uye vanhu kuti nhema mberi, asi basa rinokosha muupenyu yunivhesiti hwedu reDare vadzidzi kumbobuda panze mahwindo. Tinofanira kushanda nokungwarira chete vamwe vari bhizimisi uye hurumende kupa mahwindo kuti kubvumira vadzidzi kuti havana zvakanakisisa kushandisa hunobatsira nemano yakatanga kuyunivhesiti.
kuchinja vazhinji Parizvino kuitwa mune zvemari zvinoitwa mumayunivhesiti, kusanganisira kuderera vakawanda anodawo dzinopiwa uye kukura kusimbisa zvemakwikwi mari. Zvava kuchikosha kwatiri kuwana mari yedu pachedu kuitwa nani kune rokudzidzisa zvakatipoteredza. Ndinotenda kuti tinofanira kuita nyaya upamhi hwazvo vanhu maererano kudiwa kuvandudzika uku, netariro kugamuchira norupo rutsigiro kubva mabhizimisi kuti vanotarisira zvikuru reKyoto University, uye kubva alumni dzedu. Neniwo kutarisira kuvaka kudyidzana akasimba yeko vomunharaunda, maximizing zvakanakira nzvimbo yedu Kyoto-munyika-mukurumbira guta guru Japanese nemagariro-uye kushanda nevamwe mumayunivhesiti kukudziridza guta pacharo kuva akapfuma uye zvakasiyana-siyana zvedzidzo kembasi. Uyezve, kana tichida kubudirira yokukwezva kunoshamisa fakaroti uye vadzidzi vaibva mumayunivhesiti mhiri nyika, tinofanira kuva yepakutanga curricula vadyi tsvakurudzo zvirongwa kuti racho Kyoto raMwari zvinokwezva, uye kuti zvizivikanwe pose. Ndinonyatsoziva kuti zvinhu izvi kuchabatsira zvikuru kuti kukura kwedu nharaunda, uye kuti remangwana Japan uye nyika yose.
Somunhu nzwisisika, tsvakurudzo vaifarira inisitichusheni, Kyoto University anofanira nokusangana zvayo norupo unyanzvi uye dzidzo nheyo, unyanzvi Rokutenderwa dzidzo, uye kudzidza zvirongwa dzidzo nenzira ngaakushongedzei vadzidzi okugadzira zvinhu uye anoshanda kugona. Kuti tidaro zvinoda kukura makwara edzidzo chipiriso hierarchical urongwa siyana chirango ruzivo uye kufambisa-siyana sarudzo kudzidza. Zvinotora nguva yokuti vadzidzi kuona kwaniso dzavo nepose patinogona. Ndinovimba kuti tinogona kupa rutsigiro ekudzidza umo vadzidzi vasina kuendeswa zvisarudzo maererano neramangwana ravo, uye pachinzvimbo vanogona kutevera yakanaka mutoo muedzo uye kukanganisa kuti zvichaita kuti vakwanise kuva nechivimbo mune ramangwana kuti pakupedzisira vanosarudza.
Kuti tikudziridze vadzidzi zvakawanda Funga zvimwe zvokugadzira nezvaanogona, zvose nhengo fakaroti uye okutarisira mudonzvo anofanira vakazvipira kutevera kutsvakurudza uye nomupiro evanhu matanho kuti ukwezve dzakawanda. Kyoto University ane 10 zvichitaurwawo, 18 girajuweta zvikoro, 14 tsvakurudzo Kudya (kupfuura mamwe University muJapan), uye vazhinji nevamwe dzidzo uye tsvakurudzo zvivako. Ndichava kuita zvose zvandaigona kuti nechokwadi chokuti zvinangwa zvedu waenda mhiri zvose matavi kuyunivhesiti munharaunda idzi dzakasiyana.
Rorusununguko Pharmaceutical Sciences
The forerunner of the Kyoto University was the Chemistry School founded in Osaka in 1869, izvo, despite its name, taught physics as well. gare gare, ari Third Higher School was established in the place ofSeimi-kyoku mu 1886, it then transferred to the university’s present main campus in the same year.
Unoda discuss Kyoto University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo